Tsy Fahita Firy : Mpanao Gazety ao Shina Mitokona Manohitra Ny Sivana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Janoary 2013 9:35 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, русский, македонски, Deutsch, Shqip, Italiano, Português, English
Hotsaroana ho andron'ny fanalana baraka [sitraka] an'i Faran'ny Herinandro Tatsimo [Southern Weekend], gazety nitondra ny onjam-panitsiana eo amin'ny tantaran'ny fanaovan-gazety ao Shina ny andron'ny 6 Janoary 2013.
Tokotokony ho tamin'ny 9 ora sy sasany alina tany ho any ny kaonty bilaogy bitika Sina Weibo ofisialin'ny [zh] gazety no namoaka fanambarana fanambarana “Ho an'ny Mpamaky”, izay mitsipaka ny anjara toeran'ny departemantam-paritany misahana ny propagandy tamin'ny sivana sy fanoratana indray ny matoandahatsoratry ny Taombaovao.
Ora iray taty aoriana, nisy andian'ekipan'ny fanoratana amin'izao fotoana nanambara ny fitokonany ary niala lavitra ny fanambaran'ny “Ho an'ny Mpamaky” tamin'ny alalan'ny fanaovana fanambarana iraisana [zh] tamin'ny alalan'ny kaonty bilaogy bitika 163.com, milaza fa noraisina an-keriny ny kaontiny.
Ho fanehoa-panohanana dia namadika ny sarintavany ho kinova mainty sy fotsin'ny fangon'ny Faran'ny Herinandro Tatsimo ireo mpanao gazety sy manam-pahaizana manana ny lanjany maro.
Vondrona mpianatra mpanao gazety maneho ny fanohanana A group of journalism students in China expressed their support for Southern Weekend. Image from inmediahk.net. Non-commercial use.
Tao anatin'ny toe-draharaha
Ny andro manaraka dia namoaka bilaogy bitika lava tao amin'ny 163.com ny ekipam-panoratan'ny Faran'ny Herinandro Tatsimo, nanazava ny nahatongvana teo amin'ny “Ho an'ny mpamaky”. Tamin'ny voalohany nifanaiky ny mpitantana ny Faran'ny Herinandro Tatsimo sy ny ekipa fa hanao famotorana tamin'ny fanitsiana nahatonga resabe. Saingy noho ny fanerena avy amin'ny minisitera provinsialin'ny propagandy ao Guangdong, dia niangavy ny ekipam-panoratana hamoaka ny fanambaran'ny “Ho an'ny Mpamaky” izay manamboamboatra ny marina i Wang Genghui, tonia lefitry ny Nanfang Media (izay tompon'ny Faran'ny Herinandro Tatsimo) sy i Huang Can, mpikambana ao amin'ny komitim-panoratana sady lehiben'ny fanoratana ao amin'ny Faran'ny Herinandro Tatsimo. Tsy nanaiky ny [fiangaviana] i Wu Wei (@风端), ilay tompon'andraikitry ny bilaogy ofisialin'ny Faran'ny Herinandro Tatsimo, saingy voatery nanome ny kaonty sy ny tenihidiny ka nanambarana tao amin'ny bilaogy bitikany manokana avy eo fa tsy ho tompon'andraikitra amin'izay votoaty mivoaka ao amin'ny bilaogy ofisialy (voafafa avy eo io fanambarana nataony io).
Fihaikana tsy fahita firy
Malaza amin'ny fanivanan-gazety i Shina. Tsy mana-tsafidy afa-tsy ny mitsiky ny ankamaroan'ny mpanao gazety ao Shina ary tsy maintsy miara-miaina amin'ny sivana mandritra ny andavanandro fiasan-dry zareo. Nahatonga fihaikana tsy fahita firy manoloana ny ambaratongam-panivanana anefa ity tranga iray ity ary niantso fanohanana avy amin'ny vato nasondrotry ny tany. Tsy mitaratra ny fitokisana sy ny lazan'ny Faran'ny Herinandro Tatsimo eo imasom-bahoaka ihany ity fihaikana tsy fahitana firy ity fa manasongadina ihany koa ny herin'ny fifanakalozan-dresaka eo amin'ny governemanta sy ny ambaindain'ny media vaovao.
Araka ny talaky maso ao amin'ny bilaogy bitika Sina, manoratra i @五岳散人:
@五岳散人: Miharihary fa nahatezitra ny olona ilay trangan-javatra ary vao miha-henjakenjana. Raha tsy afa-mamaha ny olana hatrany amin'ny fakany ny governemanta dia mety handoro ny tenany ihany. Tokony hamela ny feom-bahoaka hivoaka ny governemanta fa tsy hanakana izany. Raha mandeha ny sivana, midika izany fa manao zavatra tsy mety ny governemanta ary tsy maintsy hiatrika fanontaniana momba ny olana amin'ny fitantanany ny fitondrana.
Ny zava-misy dia voakenda roroka avokoa na ny mpanoratra na ny mpanao sy ny mpiantsehatra tantara tsangana raha vao sivana no resaka ao Shina ao. Mitantara ny tena zavamisy marina iainan'ny artista ao Shina ilay mpanoratra sady bilaogera malaza , Hanhan, ary hita ao amin'ny bilaoginy [zh] (nanoratra tamin'ny bilaogy izy rehefa nofafana ny roa amin'ny bilaogy bitikany):
“Raha mianoka ity lazaina ho fahafahana ianao, ry zareo kosa mankafy amin'ny fahalalahana manasazy anao. Na miasa amin'ny literatiora ianao na fanaovan-gazety na sarimihetsika na fahitalavitra, tsy maintsy misasatra ianao manenjika etsy sy eroa mba ho eny ampela-tananao ny fahazoan-dalana avy amin'izy ireo. Tsy misy lalàna mipetraka mialoha mba hankatoavina na arahina, hany ka mety manitsakitsaka ny lalàna napetrak'izy tenany (araka izay tiany ihany koa) ianao. Amin'ny ankapobeny, tsy maintsy ataonao izay hahatonga anao ho iray amin'izy ireo, sy manaraka ireo lalàna (napetrak'izy tenany tsirairay avy). Hany ka sivaninay ny asanay sy ny asan'ny mitovy asa aminay rehefa miezaka ny mahazo izay votoatin'ny lalàna izahay, mitandrina sy matahotra izahay. “
Tsy niara-dia tamin'ny ekipam-panoratan'ny Faran'ny Herinandron'ny Tatsimo handray anjara amin'ny fihaikana ny maro hafa satria tsy te-ho voasaringotra noho ny toerana misy azy. Manoratra toy izao ao amin'ny kaonty bilaogy bitikany ny tale lefitry ny fanoratana ao amin'ny gazety-boky People:
@林天宏: Nandritra izay taona maro izay efa lasa zatra amin'ny famonoana ny vakiraoka sy ny fanivanana ny feontsika isika. Nanomboka niady varotra isika ary mandiso fanantenana ny tenantsika ihany. Efa lasa nifankazatra amin'ireo fetra hafahafa ireo isika ka naniva-tena avy eo. Tsy mahatsapa fientanentanana amin'ny asantsika intsony isika. Efa nandeha lavitra tokoa isika hahatsiarovana hoe nahoana moa no nisafidy ity asa ity isika tany am-piandohana tany. nahoana isika no tokony hanohana ny ekipan'ny Faran'ny Herinandron'ny Tatsimo? Teny indraimbava monja: fohy ny fiainana, ahoana no hanadinoantsika ny fanapaha-kevitsika voalohany [hisafidy ny asan'ny mpanao gazety] ?